Sidee baaynu ku gaari karnaa ictiraaf buuxa – Qalinkii:( Xassan Waraabe-cadde) | Salaan Media
Sidee baaynu ku gaari karnaa ictiraaf buuxa – Qalinkii:( Xassan Waraabe-cadde)
Sidee baaynu ku gaari karnaa ictiraaf buuxa – Qalinkii: Xassan Waraabe-cadde).
Waan jecelahay in aan rayi ka dhiibto qaabka ama waxyaabaha ugu mihiimsan ee aaynu ku gaari karno ictiraaf buuxa waxaayna ila tahay in aay ugu muhiimsantahay 4ta qodob ee hoos ku qoran.
4.Is iibin ama isbandhig (lobbying)
Wax walba oo bini aadmigu qabanayo ama uu jecelyahay in uu wax ka qabto waxaa hogaamisa waxa uu doonayo ma noqoto maahmaahda somaliga ah ee tidhaahda laablakacay lugana kuma joogo amba waxaad, jeceshahay indho sooma jiitaan.
Aqoontu doorkaay ka qaadanaaysaa raadinta ictiraafka taasoo ah hadii uu shaqsi ama group isku hawsho in aay raadiyaan ictiraafka waxaa ugu horeeya in aay yaqaanaan fahansanyihiin ereyga aqoonsigu macnaha uu ku fadhiyo awoodna aay u leeyahay in aay garanayaan macnaha Aqoonsiga taasoo u baahan aqoon dheeri ah.
Macnahaasi waxa uu ku fadhiyaa ujeedo(aim) iyo wax qabad Objectivies)waxaa kaloo uu leeyahay shuruudo u yaal iyo wadooyin loo maro waxaa kaloo uu leeyahay dad u ehel ah garasho dheeraad iyo talo bixin qota dheer leh.
Waa qodobka labaad taasi oo ku tusaaysa mudada ama wakhtiga uu qofku ama groupku soo hayay ama ka soo shaqeeyay hawshaas taasoo qofka baraaysa ladaala dhac iyo tacab saaid ah oo qofka ku keenta dhinac walba maskixiyan iyo maadiyanba.
Waa xanuunka iyo damqashada dheer ee wakhtigu soo baday waa waaya aragnimo ku saleeysan marwalba dhacdooyinka ku soo maray taasi waxaay ka turjumaaysaa in qofku ama kooxdu ku hanan karo dhibka aay u soo mareen wakhtiga iyo waayuhu.waata barta ama tusta qofka halka uu wax ka hagaajin kasro ama ka toosin karo,waaya aragnimadu waa qodobka ugu culus ee aay u baahantahay aqoonsigu
hadaba cidda hawshan ictiraafka raadinta ka biyo dhalinkartaa waa dadkii ama shaqsiyaadkii u soo taagnaa dhacdooyinkii iyo taariikhihii umadan ee wadankani soo maray ilaa xoriyadiisii.
Dhaqaalahu waa qodob muhiim ah maahmaah soomalidaa tiraahda farihii dufanlaa wax duuga macneeheedu waa dhaqaaluhu waa tiirka ugu adag e e uu u baahanyahay ictiraafku hadaan anigu fakarkaayga doonayo meel dani iga gashay una baahan dhaqale sida shir jaraaid ama casuumad aan cid u sameeynayo kaga dhaadhicinayo qadiyadaayda oon awoodi waayo dhaqaalihii aan hawshaa ku qaban lahaa waxba ii socon maayaan.
Xaqiiqda manta jirta qarnigan waxaay tahay xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan waxaa wax walba hogaamiya waa dhaqaale taas oo runtii manta ta ugu weeyn marka la eego aqoonta iyo waayaaragnimadaba in dhaqaaluhu ka culusyahay .
Waa marag madoonto manta in qarnigan 21aad ee aaynu ku jirno waxba kuu soconaayn hadii aanad dhaqaale haaysan waxaaynu jooganaa aduun wax la kala iibsanayo oo wax la is weeydaarsanayo taasoo ka dhigan hadii rag looyaro ah ama sharci yaqaan ah aaykaaga baahan yihiin dhaqaale waa in aad diyaar u ahaato si aad u gaadho qadiyadaada.
Marnaba haku seexanina in hadiyad aad ku heshaan ictiraafka la doonayo hawl iyo dhaqaala laan.
Cid kasyoo ictiraafka ku hawlani oo doonaaysa in aay kamidha dhaliso hadeey tahay Wasaaradda Arimaha Debadda ama Group gaara hadaanay helin dhqaale ku haboon si degdeg kuma gaaraayno sidaa daraadeed wax la waayay weeydoow ninkii waalanba u duda soow noqonaayso.
Lobbying ama is iibin
Xiligan ama qarigan wadooyinka la maro waay badan yihiin tani waxaay ka mid tahay waxyaabaha ugu culus ee dantaada ku gaaraayso ama himiladaada kaga gun gaari karto taasoo micnaheedu tahay kor iyo hoosba in aad leedahay dad kuu hadla oo kuu dusiya danahaaga hadba halkaad abaaraayso kaba soo qaad waa in aad dad ku leedahay xataa kuwaad is haaysaan.
Ma suurtoobaayso in aaynu dhagaha ka furaaysatid jidkan oo ah mid aduunka aad looga isticmaalo lagana midhadhalin karo waxaad doonaaysid. Taasi waxaay ka dhigantahay aqalka barlamanka ingriiska ee uu hogaamin jiray Machal ku waasoo mar walba u dodaqadiyadda Somaliland waxaay ku yimaadeen hawsha lobbinka ee aay qabteen jaaliyadda reer cardif.
Sidoo kale qodobkani waa muhiim wadanka gudihiisa iyo debadiisaba waa in la sameeysto saaxiibayaal inoo halgama oo fagaarayaasha inaga iibiya si hoose iyo si sareba,waxaa runtii muhiima in maskaxda lagu hayo in hadii 2 israacaan oo isla jaan qaadaan qodobkan iyo kii dhaqaalaha in aaynu gaari doono wakhti in kastaba ha qaadatee aay hesho Somaliland ictiraafkeedii oo buuxa inshaa alaah.
Waxaan hadalkii ku soo gunaanadayaa in afartaa qodob in aan xoog saarno filayana Madaxweeynaha iyo wasiirka cusub in aay u noqoto fursad aay kaga midho dhaliyaan inshaa alaah .
Hogaamiyaha maanata Madaxweeyne Siilaanyo iyo wasiirkiisuba waan hubaa in aay u leeyihiin aqoon dheeri ah luqadaha dibalomaasiyadeed ee lagu wada hadlo waxaan rajaaeynayaa in madaxweeynuhu kamidho dhalin karo himilooyinka umada iyo ictiraafraadinteeda isagoo ahaa hogaaamiyihii xoreeyay wadanka ilaahayna ku simo ictiraaf inshaa alaahu tacaalaa.
Qalinkii: Xassan waraabacadde